Vungle: Monetize gị Mobile App na Na-App Videos | Martech Zone
Oghere nke ngwa mkpanaka bụ asọmpi na ụbọchị nke ịmepụta ngwa, na-akwụ ụgwọ ole na ole, ma na-atụ anya ịlaghachi azụ na itinye ego na azụ dị anyị n'azụ n'ọtụtụ ụlọ ọrụ. Agbanyeghị, ịzụrụ ihe dị n'ime ngwa na mgbasa ozi ngwà na-aga n'ihu na-enyere aka na-echekwa ego dị egwu nke ndị mmepe egwuregwu na ngwa ngwa ekwentị na-etinye.
Vungle bụ otu n'ime ndị isi na ụlọ ọrụ a, na-enye ndị mbipụta SDK siri ike maka mgbasa ozi vidiyo mmekọrịta iji monetize ngwa ha, yana inye ndị mgbasa ozi vidiyo ohere dị egwu iji ruo ndị na-ege ntị na-ege ntị. Offọdụ ndị ahịa ha ahụwo mmụba 10x na monetization.
Ndị mgbasa ozi na-adabere na teknụzụ njikarịcha okike nke Vungle, na-ezubere iche na mgbasa ozi mgbasa ozi HD iji nweta ma nweta ndị ọrụ bara nnukwu uru n'ụwa niile. Ndị nkwusa kachasị elu na-adabere na Vungle iji gbaa mgbasa ozi vidiyo mmekọrịta na-eme ka ahụmịhe onye ọrụ na-arụ ọrụ, na-eme ka itinye aka na ndị ọrụ ma na-enwetakwu ego. Vungle na-agbaso usoro # 1 maka njigide njikwa onye ọrụ site na njikwa arụmọrụ nke ụlọ ọrụ.
Vungle ekpokọtara ihe ngosi vidiyo vidiyo dị nde 2.5 gafee ngwa mkpanaka 20,000 na usoro ha jikọtara iji tinye mgbasa ozi vidiyo na ahụmịhe onye ọrụ ala.
CEO Zain Jaffer guzobere ụlọ ọrụ na 2011 wee nwee ihe ịga nke ọma gbasaa ya na ụwa naanị n'ime afọ ise. N'ezie, ọ dịla ọnụnọ dị ịrịba ama na China (na mpaghara APAC sara mbara, maka nke ahụ), yana soro ndị nrụpụta na ndị mmekọ mgbasa ozi dịka Zynga, EA, Smule, Google, Honda, Allstate, L'oreal, Coca-Cola na Nissan, N'etiti ndị ọzọ.
Vungle na-enye ndị mgbasa ozi ikike:
Nnwale A / B ihe okike gị na ezigbo oge gafee ngwa gị.
Kwado ndị ọrụ iji mee ihe chọrọ kaadị njedebe na ngalaba mgbasa ozi gị.
Kpebie ebe ndị ọrụ gị si ahụ mgbasa ozi mgbanwe mgbasa ozi.
Site na ibipụta vidiyo dị na ngwa na ngwa dị mkpa, Vungle nwere ike ịbawanye nnweta na ngwa ndị ọzọ na-eji ngwa mkpanaka site na ịtụkwasị ndị na-ege ntị na ngwa ọdịnala anya site na ịzụrụ mgbasa ozi mmemme. Vungle na-enye ma mgbanwe mgbasa ozi na ahịa nkeonwe iji rute ndị na-ege ntị na ngwa kacha ewu ewu.
Budata Vungle si SDK
Tags: androidapụlna-egwuregwu vidio mgbasa ozimgbasa ozi vidiyo mmekọrịtaiosmicrosoftmobile video ad mgbanwemobile video mgbasa ozimaticzụ ihe mmemmeprogrammụ vidiyoịzụ ihe ngosi vidio mmemmemgbasa ozi vidiyo
Localist: Bipụta, Jikwaa ma Kwalite Ihe Omume Gị Na Onlinentanetị